ka jawaabid doodii hadhwanaagnews ee Wadahadalka Somalilnd iyo Somalia by, Mukhtar H Abdi..(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 20, 2012 Marka hore Asc Waraxmatullahu wabarakaatu. Waxaan aad ugu mahad naqayaa shabakadda caalamiga ah ee Hadhwanaag Marka hore Asc Waraxmatullahu wabarakaatu. Waxaan aad ugu mahad naqayaa shabakadda caalamiga ah ee Hadhwanaag sida fiican ee ay bulshad ugu adeegto. Intaa ka di annig waxaan jecelahay in aan arrigtidayda ka dhiibto wadahadallada London ee s/land iyo Somalia.Waxaa rumaysanahay hadii shir caynkan ah la qaatay in laga qalo in ay S/land u matalaan dad aqoon iyo waayo arrignimo dheer leh loona soo xullo sida ay falastiin u soo xuloto dadka uga qayb galaya wadahadaladooda Sababtoo ah arrinkani maaha mid ku saabsan siyaasad muddo gaaban ee waa masiirkii ummadda reer S/land iyo ubadkooda ,Haddii aan dhex dhigo ummada reer S/land cidda ay xilkaa u idman lahaayeen iyagoo oon u eegin mansab uu hayo amma gobo lee
aynu ku soo xulayno waaya arragnimada iyo aqoontooda. .Anigu waxaan ku talin lahaa in loo soo xullo shantan xubnood ee hoos ku qoran 1;Abilqaadir jirde 2;Adna Ismail 3;Mohamed haashi 4;Dr Abdirashiid iyo 5; Warrancadde..Allaa mahad leh by, Mukhtar H Abdi..ALLAA MAHAD LEH